मान्छे र उसको रोटी- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मान्छे र उसको रोटी
भात खानेहरूलाई सजिलो छ । चामललाई छड्किन छाडिदियो अनि त्यो पाकुन्जेलसम्म अर्को काम गर्‍यो । तर रोटी पकाउँदा मोबाइलमा आएको मेसेजमात्रै हेरियो भने पनि कित रोटी काँचै हुन्छ कि डढ्छ ।
जेष्ठ १२, २०७५ द न्यूयोर्क टाइम्स
काठमाडौँ — केही वर्ष पहिला पाकिस्तानी टिभीमा हेरेको एउटा विज्ञापनले म र म जस्तै कैयौंलाई तनाव दिएको थियो । त्यसमा एउटा सानी केटी पिठोलाई डल्लो पारेर रोटी बेल्दै गरेकी हुन्छे र उसकी आमाले हर्षित हुँदै परिवारका अन्यलाई भन्छिन्, ‘छोटी की पहेली गोल रोटी ! (सानीको पहिलो गोलो रोटी !)’
आफैं पुँजीपति भएकाहरूले भर्खरै फाइटर जेट उडाउन र परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्न थालेका केटीहरूलाई भान्छाको दासमात्रै बनाउन गरेको प्रयास देखेर म निराश भएँ । रोटी उत्तर भारत र पाकिस्तानको प्रमुख खाना हो । मानिसहरू बिहानको नास्तादेखि, दिउँसो र रातिको खाना सबैमा रोटी नै खान्छन् । मांसाहारी हुन् या शाकाहारी, जे भए पनि खानामा रोटी भने हुन्छ । यो हाम्रो खानाको केन्द्रविन्दु नै हो ।
मेरो गृहराज्य पन्जाब (पाकिस्तान) मा ‘खाना खाउँ’ भन्नुपरे हामी ‘रोटी खाउँ’ वा ‘मेरो घरमा रोटी खान आउनुस् न’ भन्छौं । त्यसको मतलब खानामा अन्य विभिन्न परिकारसँगै धेरै रोटी पनि खाइन्छ ।
रोटी सधैं ताजा नै खाइन्छ । रेस्टुरेन्ट र ढाबाहरूमा प्राय: गरेर पुरुषहरूले नै माटोको भट्टीमा धेरै संख्यामा रोटीहरू पकाउँछन् । तर घरमा भने दिनमा तीनपटक आगो छेउमा बसेर पसिना चुहाउँदै रोटी पकाउने काम महिलाकै हुन्छ ।
मलाई ती सानी नानीले राम्रो गोलाकारको रोटी बनाएको देखेर चिन्ता लाग्यो । किनभने अब उसले पनि अन्य लाखौं महिलाझैं आफ्नो जीवनभर तातो तावामाथि रोटी सेकाइरहनु पर्नेछ ।
म आफ्नै संघर्षलाई सम्झिरहेको छु ।
दुई दशकभन्दा केही अघि जब म मेरो भविष्यकी पत्नीको हात माग्न गएको थिएँ । त्यसबेला मेरो हुनेवाला ससुराले हाम्रो जोडीलाई खासै रुचाएका थिएनन् । मेरो पेसाको खिसी गर्दै उनले भर्खर टुसाउँदै गरेको हाम्रो प्रेमको दिगोपन बारे ठूलै वादविवाद गरेका थिए । उनले मलाई आफ्नो छोरीसँग छुटाउनका लागि भनेका थिए– ‘मेरो छोरीलाई रोटी त पकाउन आउँदैन ।’
मैले जवाफ दिएको थिएँ– ‘मलाई पनि आउँदैन । त्यसैले त हामी दुईको कुरा मिल्छ ।’
यद्यपि हामीले मध्यम वर्गको सत्यबारे भने केही कुरा गरेनौं । नभए उनले सोध्न सक्थे– ‘तिमीले रोटी बेल्न र पकाउन जान्ने कुनै केटा चिनेका छौ ? घरमा काम गर्नेहरू किन राखिएका हुन् ?’
बढ्दो उमेरसँगै म चिसो विदेशी भूमिमा बस्न थालेंँ । त्यहाँका एसियाली पसलमा पाइने ‘पित्ता’ (बाक्लो रोटी) र पाउरोटी खाँदा–खाँदा मेरो मुखलाई घरको स्वादिलो ताजा रोटीको न्यास्रो लाग्न थालेको थियो । पाकिस्तानको मध्यम वर्गको सुखसयलमा जन्मिएर काम गर्नेले पकाएर दिएको रोटी खाने बानी परेको मैले आफ्नोलागि आफैं रोटी पकाउन कम्मर कसेंँ । सुरुआत निकै कठिन थियो । मैले एउटा गोलो रोटी बेलेर पकाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । म आज पनि ती दिन सम्झन्छु ।
म बीसको हुँदा केही वर्ष प्लेन उडाउन सिक्न प्रयास गरेंँ । राम्रो रोटी पकाउन नजान्नाले मलाई प्लेन उडाउन सिक्दाको आधारभूत गल्तीहरूको सम्झना दिलायो । म प्लेन टेकअफ राम्रोसँग गर्थें, तर मेरो अवतरण भने खत्तमै थियो ।
मलाई थाहा थियो, केही कलाका लागि प्राकृतिक गुण र आँखा–हातको सन्तुलनको विशेष भूमिका हुन्छ । तर हामीलाई सिकाइएको थियो, कुनै यात्रामा निस्कनका लागि पहिला विमान चढ्नुपर्छ । आज पनि म कहीँ औपचारिक छलफल वा साहित्य मेलामा भाग लिइरहेको बेला राम्रो गोलाकार रोटी बनाइरहेको कल्पना गर्छु । मेरो दिमागमा मेरो रोटी जहिले पनि गोलाकार नै हुन्छ, छेउछेउमा केही कडा र तावामा सेक्दै गर्दा बेलुनजस्तै फुलेको ।
प्लेन उडाउनु जस्तै रोटी पकाउन पनि पूर्णरूपमा एकाग्रता आवश्यक पर्छ । केही समयका लागि पनि तपाईंले यताउता ध्यान लगे रोटी डढेर प्वाल पर्छ र त्यो बेलुन कहिल्यै उठ्दैन ।
भात खानेहरूलाई सजिलो छ । चामललाई छड्किन छाडिदियो, अनि त्यो पाकुन्जेलसम्म अर्को काम गर्‍यो । तर रोटी पकाउँदा मोबाइलमा आएको मेसेजमात्रै हेरियो भने पनि कित रोटी काँचै हुन्छ कि डढ्छ ।
त्यसैले म सोच्छु– ‘मेरी आमाले मलाई किन यसको लागि तयार गरिनन् ?’ र अनगिन्ती पटक आफैंलाई भन्छु, यो पिठो नै ठिक छैन । हुन त पिठोमा पानी वा पानीमा पिठो हाल्ने हो । तर केही थोपा बढी पानी हालियो भने पिठो थप्नुपर्छ, पिठो धेरै भएपछि फेरि पानी हाल्नुपर्छ । दुवैको मात्राको अड्कल भएन भने पिठो मुछ्ने काम कहिल्यै सकिँदैन ।
राम्रो रोटी पकाउनेले गोलो रोटी बनाउन बेल्ना र चक्लाको प्रयोग गर्दैनन् । मुछेर गोलो बनाएको पिठोको डल्लोलाई हातमै यताउति गर्दै पिटेर, फर्काएर गोलाकार रोटी बनाउँछन् र तातो तावामा फट्कारिदिन्छन् । त्यसैले त रोटीको अर्को नाम ‘चपाटी’ हो । चपाटीको अर्थ पिटेर बनाइएको वस्तु हो । म बच्चा हुँदा बिहान त्यसरी नै हातमा फर्काइ–फर्काइ रोटी बनाउँदा निस्कने आवाजबाट बिउँझन्थेंँ र लाग्थ्यो, आज मिठो खाना पाक्दैछ ।
आमाले कहिलेकाहीं सबै घरपरिवार जम्मा हुँदा एक पटकमा ५० वटासम्म रोटी पकाउनुपथ्र्यो । मलाई त्यो बेला कहिल्यै रोटी पकाउनु ठूलो काम हो जस्तो लागेन । तर अहिले जब म आक्कल–झुक्कल ५ वटा रोटी पकाउँछु, मलाई लाग्छ, म अद्भुत मान्छे हुँ र मलाई यसका लागि मेडल नै दिइनुपर्छ ।
म जस्ता धेरै पुरुषहरू छन्, जो आफू विकसित भएको ठान्छन् । मेरै समकालीनहरू यस्ता पनि छन्, जो आफूले पकाउन जान्ने कुरा सुनाउँदै हिँड्छन् । र केही आफूले बनाउने तरकारी र पिस्ने मसलाबारे बयान गरेर थाक्दैनन् । यस्तै केही आफूलाई मासु पोल्नेहरूको राजा मान्छन्, लाग्छ यो पृथ्वीमा उनीहरूले नै मासु पोल्न सुरु गरेका हुन् । तर रोटी पकाउन आउँछ भनेर सोध्यो भने, उनीहरू भान्छामा आफ्नोलागि रोटी पकाइदिनेतर्फ औंला तेस्र्याउँछन् वा रेडिमेड मैदाको पित्ताको प्याकेट देखाउँछन् ।
पुरुष हुनुको साँचो उपलब्धि मैले तबमात्रै बुझेंँ, जब एकजना वयोवृद्ध पुरुषलाई आफ्नो डाइनिङ टेबुलमा बसिरहँदा एक महिला भान्छाबाट हातमा तात्तातो रोटी लिएर दौडँदै गरेको देखेंँ । त्यसपछि उक्त पुरुषले रोटीलाई बीच भागबाट च्यात्यो र तरकारीमा चोपेर खायो । त्यो रोटी आधा नहुँदै उसको प्लेटमा अर्को तातो वाफ उड्दै गरेको रोटी आइसक्यो । र त्यो मान्छेले रोटीको बीच भागमात्रै खायो, अरु त्यही प्लेटमा छोडिदियो ।
मेरो साढे ३ वर्षको छोरोको खाना खाँदा किचकिच गर्ने बानी देखेर म आजित भइसकेंँ । तैपनि ऊ आफूलाई खान मनलागेको तीनथरी रोटीको नाम लिन सक्छ । कहिले त मलाई लाग्छ, म छोरामा त्यही वृद्ध मानिसजस्तै आफ्नो श्रीमतीलाई सताउने बानीको विकास गर्दैछु । त्यो हो पनि । तर जीवनभरको सम्पूर्ण रूपमा राम्रो रोटी बनाउने प्रयासको विफलतापछि मैले मेरी श्रीमतीलाई उनी राम्रोसँग पिठो मुछ्न भने अब्बल छिन् भनेर आश्वस्त पारेको छु । अब रोटी पनि राम्रो बन्यो भने त मैले मेडल नै पाइहालेंँ । नभए पनि केही छैन, किनकि मुछेको पिठोमै केही समस्या छ ।
(द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित यस लेखका लेखक माेहम्मद हानिफ पाकिस्तानी मूलका बेलायती उपन्यासकार हुन् ।)
प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७५ ०७:५१
वैशाख २९, २०७५ द न्यूयोर्क टाइम्स
काठमाडौँ — तपाईंलाई आफू कति वर्षको देखिन्छु भनेर थाहा पाउन मन छ भने फ्रेन्च क्याफेभित्र पस्नुहोस् । त्यहाँ तपाईंको अनुहारलाई लिएर सानोतिनो जनमत संग्रह नै हुन्छ ।म पेरिसमा ३० लागेपछि बस्न थालेकी हुँ । त्यतिबेला वेटरहरूले मलाई ‘म्याडममोजेल’ (सुश्री) भन्थे ।
म कुनै क्याफेमा छिरेंँ भने उनीहरू ‘बोन्जोर (शुभप्रभात/हेलो) म्याडममोजेल’ भनेर मेरो अगाडि कफी राखिदिन्थे ।
जब म चालीस लागेंँ, त्यसपछि भने समूहगत रूपमा नै वेटरहरूमा परिवर्तन आयो । उनीहरू मलाई ‘म्याडम’ (पाका वा विवाहित महिलालाई गरिने सम्बोधन) भन्न थाले । सुरु–सुरुमा उनीहरूले ‘म्याडम’ भनेर परीक्षण गरिरहेको जस्तो लाग्थो, पछि एक्कासी असिना परेजस्तो सबैतिरबाट यस्तै सम्बोधन ओइरिन थाल्यो । अब म क्याफे छिर्दा उनीहरू ‘बोन्जोर म्याडम’ भन्छन्, पैसा तिर्दा ‘मेसी (धन्यवाद) म्याडम’ र त्यहाँबाट निस्कँदा ‘अख्भ्वां (फेरि भेटौंला) म्याडम’ भन्छन् । कहिलेकाहीं त धेरै वेटरहरूले एकैपल्ट यस्तो भन्छन् ।
एकातर्फ मलाई यो परिवर्तनले केही नयाँ कुरा जान्न उत्साही बनाइरहेको छ– के यी वेटरहरू काम सकिएपछि कतै वाइन खान जम्मा हुन्छन् र कुन केटीलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने भनेर निर्णय लिन्छन् ? रिस उठ्दो कुरा त पुरुषहरू भने सदैव ‘मस्युर (श्रीमान)’ कहलाइन्छन् । सबैभन्दा खत्तम कुरा, उनीहरू मसँग विनम्र हुन खोजेका हुन् । उनीहरूलाई लाग्छ, म सुश्री भनिनका लागि ठूली भइसकें ।सडक किनारमा माग्न बसेकी एक महिलाका कारण मलाई लागेको छ– केही कुरा सदाका लागि परिवर्तन भइसक्यो । उनी मिनीस्कर्ट लगाएर मभन्दा केही कदम अगाडि हिँडेकी युवतीलाई ‘बोन्जोर म्याडममोजेल’ भन्छिन् र मलाई ‘बोन्जोर म्याडम’ ।यी सबै परिवर्तनहरू यति छिटो भए कि म पचाउनै सकिरहेकी छैन । मसँग अझै पनि धेरै लुगाहरू छन्, जुन म ‘म्याडममोजेल’ हुँदा लगाउँथँे । मेरो भण्डारमा ‘म्याडममोजेल–युगको’ क्यानफुड पनि टन्नै छ । तर मलाई सम्बोधन गरिने शब्दहरूले भने म अर्कै उमेरावस्थामा प्रवेश गरिसकँें भन्ने बताउँछन् । लिफ्टभित्र बत्तीको प्रकाशमुनि मेरो अनुहारको भाव पढेर मेरी छोरी मलाई भन्छे– ‘ममी, तपाईं बूढी हुनुभएको छैन, तर तपार्इं पक्कै पनि जवान हुनुहुन्न ।’आखिर के हो यो ‘जवान नहुने’ उमेर ? २० को उमेर समूहकाले ४० वर्षकालाई धेरै दशक अगाडिका मानिसहरू– जसले यो युगका धेरै कुरा भोग गर्न छुटाए– भनेको सुन्छु । तर वृद्ध उमेर भएकालाई सोध्यो भने उनीहरू पुन: ४० वर्षको हुन चाहन्छन् ।
‘म ४० को हुँदा कहाँ मैले आफूलाई बूढो भनेर सम्झन्थँें त ?’ सन् १९८५ मा ४० बसन्त पार गर्नुबारे किताब लेखेका मानवशास्त्री स्ट्यान्ली ब्रान्डेस भन्छन्, ‘म त्यो बेलालाई सम्झन्छु र सोच्छु, म निकै भाग्यमानी थिएँ । म त्यो समयलाई वास्तविक जीवनको सुरुआतका रूपमा लिन्छु, नकि जीवनको समाप्तिको सुरुआत ।’
‘द हन्ड्रेड–इयर लाइफ’का सहलेखक तथा अर्थशास्त्री एन्ड्रयु सक्ट भन्छन्, ‘चालीस वर्ष प्राविधिक रूपमा पनि अब जीवनको बीचको उमेर होइन । ‘अहिले ४० मा रहेकामध्ये ५० प्रतिशत ९५ वर्षसम्म बाँच्ने सम्भावना छ ।’
अंक ४० को गहिरो प्रतिकात्मक अर्थ पनि छ । यशुले ४० दिनसम्म वर्त बसेका थिए । मोहम्मद त्यतिबेला ४० वर्षकै थिए, जतिबेला उनलाई अल्लाहका दूतले दर्शन दिए । इजरायलीहरू ४० वर्ष मरुभूमिमा रुमल्लिए । यस्तै केही भाषामा ४० को अर्थ ‘धेरै’ भन्ने पनि हुन्छ ।वर्ष चालीस जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘चालीसमै मानिसहरू आफू जे हो, त्यो हुन्छन्,’ ७० टेकिसकेका बेलायती लेखक भन्छन्, ‘यदि कसैले ४० को हुँदा पनि आफू के हो भनेर थाहा पाउँदैन भने उसले कहिल्यै थाहा पाउँदैन ।’म्याडम शब्दसँग जोडिएपछि ममाथि नयाँ नियमहरू पनि लागू हुनथालेका छन् । जब म कहिलेकाहीं बच्चपना देखाउँदै केही नजाने जस्तो गर्छु, मानिसहरू दंग पर्दैनन्, बरु हाँसोको पात्र बनाउँछन् । अनभिज्ञता मेरा अनुहारमा देखिनु हुँदैन । मानिसहरू मबाट सधैं सही कामको मात्रै अपेक्षा राख्छन् । म भेटघाटका लागि सधैं समयमै पुग्नुपर्छ ।
मस्तिष्कमाथि गरिएको अनुसन्धानले ४० पुगेपछि केही काम गर्न गाह्रो हुन्छ– हामी जवान मानिसभन्दा केही छिट्टै विच्कन्छौं, नयाँ सूचनाहरू विस्तारै ग्रहण गर्छौं र तथ्यहरू सम्झनलाई पनि गाह्रो हुन्छ । कहिलेकाहीं त ‘हेमोरोइड्स’ जस्ता शब्द सम्झनलाई ४८ घन्टै खर्चनुपर्छ ।यसको अर्को पाटो पनि छ । हामीले गर्ने काम अनुभवले खारिएको परिपक्व र तर्कसंगत हुन्छ । हामी जवानहरूले भन्दा राम्रोसँग कुनै पनि परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न, भावनालाई नियन्त्रणमा राख्न र द्वन्द्वको समाधान गर्न सक्षम हुन्छौं । हामीमा अर्थ व्यवस्थापन गर्ने र विषयको गम्भीरतालाई बुझेर त्यसको विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ । हामी जवानहरूभन्दा बढी भावनात्मक पनि हुन्छौं । र सबैभन्दा ठूलो आफ्नो खुसीका लागि बढी संवेदनशील हुन्छौं ।
दुई हजार वर्ष पहिला एरिस्टोटलले ‘वयस्क’ मानिसबारे भनेका थिए– ‘आफूसँग प्रचुर मात्रामा आत्मविश्वास भए पनि उनीहरू मनलाग्दी गर्दैनन्, न त आफूमा भएको डर नै देखाउँछन् । दुवै कुराको मेल हुन्छ, उनीहरूको भावमा । उनीहरू न सबैलाई विश्वास गर्छन्, न अविश्वास । तर मानिसको मूल्यांकन सही गर्न सक्छन् ।’ यही कुरा अहिलेको न्युरोसाइन्स र मनोविज्ञानले पनि पुष्टि गरेका छन् । म मान्छु, हामीले वास्तवमै अगाडि बढ्न सिकेका छौं । हामी कुनै पनि वस्तुको अन्तरनिहित विषयमा ध्यान दिन्छौं । हामीलाई हाम्रा अभिभावकले पनि परिवर्तन हुन प्रेरित गर्न छोडिसकेका छन् । हामी कुनै कुरा कहिले हास्यास्पद हुन्छ भन्न सक्छौं । ४० लागेपछिको यात्रामा ‘कसैले मलाई मनपराउँदैनन्’ भन्ने छोडेर ‘कसैलाई मतलब नै हुँदैन’ भन्ने भावमा पुग्छौं ।
यसो भए पनि यो दशक निकै अलमल्याउने खालको हुन्छ । एकातर्फ हामी मानिसहरूले देखाउने व्यवहारबाट परिणामको पूर्वाभाष गर्न सक्षम हुन्छौं भने अर्कोतर्फ दोहोरो अंक याद राख्न सक्दैनौं । यो उमेरमा कित हामीले यथेष्ठ कमाउन थालिसकेका हुन्छौं वा त्यसको बाटोमा हुन्छौं र हामीलाई ‘बोटोक्स’ (चाउरीपना कम गर्ने औषधी) को प्रयोग ठिक हो भन्ने लाग्न थाल्छ । हामी आफ्नो व्यावसायिक जीवनको उच्च विन्दुमा हुन्छौं र त्यो कसरी सकिन्छ पनि देखिरहेका हुन्छौं ।
यो उमेरमा सम्झन लायकका उपलब्धि भने कम हुन्छन् । बाल्यकाल र तरुण अवस्थामा देखिने उपलब्धि धेरै हुन्छन्– हामी बढिरहेका हुन्छौं, हरेक वर्ष नयाँ कक्षामा प्रवेश गरिरहेका हुन्छौं, स्नातक सकाउँछौं, सवारी चलाउने लाइसेन्स प्राप्त गर्छौं । त्यसपछि २० देखि ३० को बीचमा प्रेम हुन्छ, बिहे हुन्छ, जागिर खान्छौं आफू र आफ्नो परिवार रोखदेखको जिम्मेवारी बहन गर्न थाल्छौं । त्यसैबेला बच्चा हुन्छ, जागिरमा बढुवा हुन्छ । यी सबै कुराले दिने चरमोत्कर्षले हामीलाई अगाडि बढ्न र वयस्क भएर जीवन जिउन प्रेरित गर्छ । चालीस लागेपछि भने प्राप्त सबै उपलब्धिहरूले हामीलाई चकित तुल्याउन छोडिसक्छ । हाम्रो उपलब्धिमा खुसी र उत्साही हुने अभिभावक र गुरुहरू आफ्नो उत्तराद्र्धको समयमै व्यस्त हुन्छन् । बरु बालबच्चा छन् भने हामी उनीहरूको उपलब्धिमा चाहिँ खुसी हुन थाल्छौं ।
‘पाँच वर्षअघि कसैलाई भेट्दा उनीहरू ‘वाह ! तपाईं हाकिम हो भन्थे ?’ ४४ वर्षे एक टेलिभिजन प्रोडक्सन कम्पनीका प्रमुखले मसँगको भेटमा भने, ‘तर अहिले त्यही हुनु कुनै ठूलो विषय नभएको जस्तो दर्शाउँछन् ।’हामी कस्तो उमेरमा पुग्यौं ? हामी केही काम गर्न र १० किलोमिटर दौडका लागि अझै सक्षम छौं । तर यो उमेरमा नयाँ विषयले पनि महत्त्व पाउँछ– हामी मृत्युप्रति सजग हुन्छौं । त्यो पहिले हुँदै थियो । हामी धेरैजसो विषयमा त्यति उतिविघ्न चिन्तित हुँदैनौं, जुन विषय पहिले हाम्रालागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थे । अब हामी प्यारेन्टस–टिचर मिटिङमा जान्छौं, पर्वहरूमा परिवारका लागि खाना पकाउँछौं ।
अहिले मलाई कोही कसैले यो सब परिवर्तन गर्न केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ । र त्यो ‘कोही’ भनेको मै हुँ भन्ने पनि महसुस भइसक्यो । यो संक्रमणकालीन उमेर सहज भने छैन । मलाई सधैं वयस्कहरूले विश्वका लागि केही गरिरहेका छन् भन्ने लाग्थ्यो र अहिले पनि लाग्छ । उनीहरूले क्यान्सरको उपचार गरिरहेका छन्, नयाँ शोधहरू गरिरहेका छन् । उनीहरू विमान उडाउँछन् । उनीहरूलाई कुन समाचार पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छाप्ने भन्ने थाहा हुन्छ । संकटको बेला पनि म वयस्कहरूको समझदारीलाई नै विश्वास गर्छु ।मलाई वयस्क देखिनुमा कुनै गुनासो छैन । तर म ४० को भएर वयस्क भएकोमा भने उदास छु । किनकि मलाई लाग्छ, मैले आफूमा भएको क्षमताभन्दा अगावै बढुवा पाएँ ।
- पामेला डुकरम्यान
(द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनूदित ।)
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०७:३४